Efesiana 1: 3-14
Efesiana 1 Efesiana 2
Isaorana anie Andriamanitra Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika Izay nitahy antsika tao amin'i Kristy amin'ny fitahiam-panahy rehetra any an-danitra,
araka ny nifidianany antsika tao aminy, fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika.
rehefa notendreny rahateo amin'ny fitiavana isika mba ho Azy amin'ny fananganan-anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, araka izay ankasitrahan'ny fony,
ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany, izany nanasoavany antsika maimaimpoana ao amin'ny Malala.
Izy no ananantsika fanavotrana amin'ny rany, dia ny famelana ny fahadisoantsika, araka ny haren'ny fahasoavany,
hahatanteraka ny fitondrana hatao mandrapahatapitry ny andro voatendry, hanangonany [hanagonany indray] ny zavatra rehetra ho iray ao amin'i Kristy, na ny any an-danitra, na ety an-tany, dia ho ao aminy;
ao aminy koa no nanaovana antsika ho lovany [no nandraisantsika ny lova.], rehefa notendrena rahateo isika araka ny fikasan'Izay mahefa ny zavatra rehetra araka ny ankasitrahan'ny fony,
Ao aminy koa hianareo, rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana, dia ny filazantsara famonjena anareo, - eny, ao aminy koa hianareo, rehefa nino, no nasiana tombo-kase tamin'ny Fanahy Masina araka ny teny fikasana.
Izany Fanahy izany no santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona izay nalainy ho an'ny tenany, ho fiderana ny voninahiny.